Celtra AdCreator: Ngosipụta Dijitalụ na Mgbasa Ozi vidiyo CMP | Martech Zone
Onyedikachukwu ejiri ihe karịrị 50 dọrọ na dobe ihe mejuputara ya na ihe kariri ihe 200 emere, atụmatụ a haziri ahazi maka okike ad. Ihe ndebiri a na-eme n'ime na-eme ka imepụta ngwa ngwa, mmepe, ma hụkwa na nkwekọ, gụnyere Loclọ Ahịa Store, Inline Video Player, Galleries, Social Sharing na ndị ọzọ.
A na-anwale akụkụ niile na atụmatụ nke AdCreator n'ofe ngwaọrụ, sistemụ arụmọrụ, na gburugburu. AdCreator nwekwara akpaka wuru na-emesi obi ike njikwa, yabụ na ịmara ihe ị hụrụ bụ kpomkwem ihe onye ọrụ ahụ ga-ahụ.
Nzaghachi na-emeghachi omume na-enyere gị aka ịmepụta otu okike mgbasa ozi na-eme ka ọtụtụ nha ihuenyo. AdCreator’s animation ikike gụnyere ọkọlọtọ ihe na-aga aga, na-aga aga tent na-aga aga dị ka akụkụ nke omume usoro iheomume. Maka ihe eserese dị mgbagwoju anya, ịnwekwara ike iji usoro ihe omume ma ọ bụ jikọta na JS.
Atụmatụ AdCreator gụnyere:
Ihe omimi Dynamic - Ihe okike na-adọrọ adọrọ, nke na-agbanwe agbanwe nke na-ahaziri nke ọma ma na-egosipụta ọnọdụ onye ọrụ n'oge ọ bụla enweghị oke ọrụ. Mee ngwa ngwa ma hụchalụ otu ihe okike - mee ka ihe ọ bụla dị ike site na vidiyo na nzụlite na ederede na URLs.
Auto-play Na-akara Video Player - Ebe inline, auto-play, elu-edu video n'ebe nile. Enweghị mgbochi ọ bụla, ọ dịghị ihe ntụgharị GIF na-akpali akpali. AdCreator na-enye gị ohere ịmepụta mgbasa ozi vidiyo zuru oke yana koodu vidiyo na-akpaghị aka maka ngwaọrụ, ọsọ, na ogo.
Enweghị koodu (ma ọ gwụla ma ịchọrọ) - Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịdebanye aha, ha ekpughela ihe niile site na API ha, na-enyere gị aka ịgbakwunye JS omenala ma ọ bụ setịpụ usoro ịkpọ, peeji na njikwa peeji nke, ihe omume na mmekọrịta.
Na-agba ọsọ na ihe ọ bụla Ad Server - Ejirila ihe okike ndị ejiri Celtra na-emepụta ihe eji eme ihe nyocha ma gbaara ha ọsọ gafee ọtụtụ ngwaọrụ, gburugburu, ngwa, saịtị na sava mgbasa ozi; a ana achi achi na ma nsụgharị na akuko na-arụ ọrụ dị ka ha kwesịrị. Ihe e kere eke na-agba ọsọ n'enweghị nsogbu na ihe karịrị iri abụọ 1st & 3rd otu ad sava.
Easy Michael - Hụchalụ ndị okike gị n'ofe ngwaọrụ niile, ọdịiche dị iche iche na nha ihu. Site na iji otu ịpị, ziga ndị ahịa ihe nlere URL nke AdCreator ka ha nwee ike ịlele ihe okike na desktọọpụ ha ma ọ bụ ngwaọrụ mkpanaaka.
Ọzụzụ na Mbupu n'efu - Site n’ọbá akwụkwọ sara mbara nke isiokwu nkwado iji nweta ọzụzụ ọzụzụ na ntanetị, webinars kwa izu na nkwado email ọkachamara, ebumnuche ha bụ iji hụ na ị ga-enweta ọtụtụ ihe site na ikpo okwu njikwa ihe okike nke Celtra.
Tags: nhazi adọkpụkpọ egwuregwuOnyedikachukwuCeltraCeltra AdCreatorverandaMgbasa ozi osisiOnye ọkpụkpọ vidiyo n'imeInline Video Player Mgbasa ozi esighi naemebe ad imewemmekọrịta mmadụ na ibe yaMgbasa ozi mmekọrịtaechekwa ụlọStorelọ ahịa Locator Adsvideo ad imewemgbasa ozi vidiyoọkpụkpọ vidiyo